ShweMinThar: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေခြင်း …..
ကျနော်တို့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေ မလဲ? ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ? ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ? လေ့ကျင့်ယူလို့ရသလား? အဓိကအနေ နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို တိတိကျကျမသိရှိမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ကလည်းဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုတဲ့ အ၀န်းဝိုင်းထဲမှာကိုက Attitude ဆိုတာပါနေပြီးသာလည်းဖြစ်ပြန် ပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှုထောင့် (၅) မျိုးကနေ ချည်းကပ်လေ့လာရပါမယ်။ အဲဒီရှုထောင့်တွေက တော့ (1) Spiritual Development (2) Emotional Development (3) Mental Development (4) Social Development (5) Physical Development ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဖေါ်ပြပါ ရှုထောင့်များကနေ မချည်းကပ်မှီ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလည်းဆိုတာကို အခြေခံအားဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်။ လူတစ်ဦးတစ် ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှာ အဓိကကျတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းက “What do you want to be?” … ဆိုတာပါပဲ။ ခင်ဗျားဘယ်လိုလူဖြစ်ချင်ပါသလဲ? လို့မေးတာပါ။ လူတိုင်း ဘာဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘ၀ကို ဘယ်နည်းဘယ်ပုံရှင်သန် ချင်တယ်၊ ချမ်းသာချင်တယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်တယ်၊ ပညာတွေအများကြီးတတ်ချင်တယ် … အစရှိသည်ဖြင့် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ Personal Goal ပေါ့။ သို့သော်လည်းပဲ ဘ၀မှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေများ တဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ Personal Goal တွေကိုတော့ Realistic ကျကျ ချမှတ်တာဟာ လက်တွေ့အကျဆုံးပါပဲ။ ပြောချင်တာက စိတ်ကူးယဉ်ပါ။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စိတ်ကူးကိုယဉ်ပြီး စိတ်ကူးအတိုင်း ဖြစ်အောင်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ပါ။ ဒီလို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ယခုကျနော်ရေးသားတင်ပြနေတဲ့ Personal Development ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုတာက အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍကနေပါဝင်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဲလုပ်လုပ်၊ တစ်ဦးတည်းပဲလုပ်လုပ် မည်သည့်အလုပ်မဆို ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ဆိုတာရှိကိုရှိရ ပါမယ်။ Objective, Goal တွေကို ချမှတ်တဲ့နေရာမှာသော်လည်းကောင်း Vision, Mission, Core Value များကို ချမှတ်တဲ့ နေရာမှာသော်လည်းကောင်း သဘာဝကျကျ လက်တွေ့ကျကျ ချမှတ်ရပါမယ်။ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဖြစ်နိုင်တာကို ရည်မှန်းချက်အဖြစ် ချမှတ်ရပါမယ်။ Goal ပန်းတိုင်မရှိတဲ့ လူ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ ဦးတည်ရာမဲ့သွား နေတဲ့ သဘောင်္ကြီး တစ်စင်းလိုပါပဲ။ အချိန်မရွေး အန္တရာယ်ဇုံထဲကိုကျရောက်သွားပြီး ဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့ကြုံနိုင်ပါ တယ်။ ဆိုတော့ကာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပန်းတိုင်ကို သေချာသတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက် ချီတက်ရပါတော့မယ်။ Implementation ကိုဆောင်ရွက်ရပါတော့မယ်။ ဒီနေရာမှာ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ စကားပြောလာပါပြီ။ မလျှော့သော ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းရပါတော့မယ်။ ဒီနေရာမှာပြန်စဉ်းကြည့်တဲ့အခါ ဒီ Implementation Stage ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ “သင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ” ဆိုတာထက် “သင်ဘာလုပ်နေတာလဲ” ဆိုတာက ရှေ့ရောက် လာပါပြီ။ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ Goal ကချမှတ်ပြီးဖြစ်လို့ သင်ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့ Plan Implementation က ရှေ့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Plan တွေရဲ့ အဓိက ကျဆုံးခန်းက ဒီ Implementation Stage မှာပဲ အများဆုံး ကျဆုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ အဆုံးသတ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ Project လည်း Project အလျောက် အဆုံးသတ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းသည်လည်း ကျဆုံးခန်းကိုရောက်စေပါတယ်။ “အရှုံးကို စတင်လက်ခံလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး သင်တကယ်ရှုံးတော့တာပါပဲ” ဆိုတဲ့ စကားရပ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဒီ အရှုံး ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက အလျှော့ပေးမှ ရှုံးတာလို့ ခံစားနားလည်မိပါတယ်။ အလျော့မပေးမချင်း မရှုံးသေးဘူးလို့လဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ရပါ သေးတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းဟာ လက်ခံအတွင်းစိတ် စိတ်ပျော့ညံ့လို့ဖြစ်တာလို့ Oxford University ရဲ့ Psychologist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Linda က 1976 ခုနှစ်ကတည်း ဆိုထားပါတယ်။ အခုထက်ထိမှန်နေတဲ့ Theory တစ်ရပ်ပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ လက်ခံအတွင်းစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ Inner Acceptance Mind ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီလက်ခံအတွင်းစိတ် ပျော့ညံ့တဲ့အခါမှာ လူဟာ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ ယုံကြည့်မှုနည်းပါးလာလေ့ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကမ္ဘာကျော် စိတ်ပညာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ ABC of Human Mind ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ကလေးလေးမွေးလာကတည်းက သူကြီးပြင်းလာမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု Environmental Influence က ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ ဒီကလေးလေး ရဲ့ Inner Acceptance Mind မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အဲဒီသက်ရောက်မှုဟာ ကလေးလေး တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားပြီး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိသော်လည်းကောင်း၊ အသက်အတော်အတန်ရနေတဲ့အချိန်အထိသော်လည်းကောင်း စွဲနေတတ်ပါ တယ်။ ဒီနေရာမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်အောင် မိဘတွေအနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ အရွယ်ရောက် လာတဲ့အချိန်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ကြိုးစားတည်ဆောက်ရယူရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အရေးကြီး အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိအောင် ယုံကြည်မှုမြင့်မားလာအောင် ရှာဖွေတည်ဆောက်ရယူရပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ချက်က လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မပြေမလည်ဖြစ်မှုဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ မပြေမလည်ဖြစ်မှုဆိုတဲ့သဘောမှာ က အခြေအနေ အကြောင်းတရားများစွာရှိနေတတ်ပါတယ်။ Both Side ဖြစ်နိုင်သလို ရှုဒေါင့် Aspects မျိုးစုံကလည်း မပြေ လည်မှုအကြောင်းတရားတွေက ပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ မိမိဘက်က လိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်သလို အခြားဘက်က လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအတင်ဖြစ်လာခဲ့ရင် Tension Level မြင့်လာလေ့ရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်လို့ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ Communication and Negotiation Skills တွေကို အသုံးပြုပြီး Tension Level ကို လျှော့ချရပါမယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာအထိရောက်အောင် အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ပြီး Negotiate ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်ဖက်ရည်းမှန်းချက်တွေကို Win – Win ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေခြင်းမှာ ယခုရှင်းပြတဲ့ Communication and Negotiation Skills ကိုလည်း မြင့်မားအောင် တည်ဆောက်ထားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေခြင်းအဆင့်မှာ သတိပြုပြီး တည်ဆောက်သင့်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နောက်တစ်ချက်ကတော့ Time Management ပါပဲ။ အချိန်ကို ကောင်းမွန်ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ရက် မှာ (၂၄) နာရီရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ (၈) နာရီ (၃) ပိုင်းပိုင်းကြည့်ရအောင်ပါ။ ပထမ (၈) နာရီမှာ လူတွေအိပ်စက် အနားယူကြတယ်။ ဒုတိယ (၈) နာရီမှာ လူတွေအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ တတိယ (၈) နာရီမှာကြတော့ အောင်မြင်သူနဲ့ ကျရှုံးသူကို အချိန်က အဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ပထမ (၈) နာရီမှာ လုံလောက်စွာ အိပ်စက်မှုပြုကြသလား? ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ မပြည့်ကြဘူး။ Facebook သုံးတဲ့သူနဲ့ စာဖတ်တဲ့သူနဲ့ အလုပ်ကြွေးကျန်တွေအိမ်ယူလုပ်တဲ့သူနဲ့ လည်တဲ့သူနဲ့ လူမျိုးစုံ အလုပ်မျိုးစုံလုပ်နေတာကို ပထမ (၈) နာရီ စက်ဝန်းမှာမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ သုံးသပ်လိုက်ရင် Effective မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ကဲ ဒုတိယ (၈) နာရီကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ကျနော်တို့ ဒုတိယ (၈) နာရီမှာအလုပ်လုပ်ကြ တယ်ဆိုပေမယ့် ရှစ်နာရီအပြည့်အ၀မလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ (၁၀) နာရီလောက်လုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကြိုးစားတဲ့သူတွေ ရှိကြတယ်။ မကြိုးစားတဲ့သူတွေရှိကြတယ်။ ကိုယ်ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်။ ကြုံရတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ? အချိန်ကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တတ်ခြင်းနဲ့ မလုပ်တတ်ခြင်းက စကားပြောသွားတာပါပဲ။ တတိယ (၈) နာရီကို သုံးသပ်ကြည့်ရာမှာ အဲဒီ (၈) နာရီမှာ သင်ဘာလုပ်လေ့ရှိပါသလဲ။ အရည်အချင်းတွေထပ်ဖြည့်နေသလား၊ Life Plan ချမှတ်ပြီး ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်နေပါသလား။ အချိန်ကို အလဟသမဖြစ်စေပဲနဲ့ မိမိဘ၀ရှေ့ရေး အတွက် ဘယ်လိုကြိုးစားနေပါသလဲ … ဆိုတာတွေက အောင်မြင်မှု ကျရှုံးမှုတွေကို ခွဲခြားပေးသွားတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ ယခု Time Management Skills ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်အချက်တွေက စိတ်နေသဘောထား Attitude နဲ့ တွေးခေါ်ပုံတွေးခေါ်နည်း Ways of Thinking … နောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း Decision Making … အကျင့်စရိုက်ဆိုတဲ့ Habit … ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ Leadership Style … စတာတွေဟာလည်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ ရှေ့တန်းကိုတင်ထားရမယ့် အချက်တွေပါ ပဲ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မြှင့်တင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်တကယ်လိုအပ်ချက်ကို အရင်မြင်တွေ့အောင် ကြည့်ရှုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုတင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေအကုန်လုံးကို သင်တန်းတွေတက်ပြီး လိုက်ဖြည့်နေတာဆိုရင် အခုပြောမယ့်စကားလေးကို သတိထားပါ။ အဲဒါက “အများကြီးတတ်ပြီး သုံးမရတာထက်စာရင် တစ်မျိုးထဲမှာ ထူးချွန်ပြီး အသုံးကျ အသုံးဝင်တာက ပိုကောင်းပါတယ်” ဆိုတာပါပဲ။ နောက်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ညံ့စေတာက ဒေါသထွက်တာ ပဲ။ ဒေါသထွက်ရင် မမြင်တော့ဘူး မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး တုန့်ပြန်မှုကိုပဲ ဆောင်ရွက်တတ်တယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ် သွေး ကျဆင်းရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ အရေးကြီးပါတယ်။ ထိန်းပါဒေါသကို။ ဘာမဖြစ်လို့၊ ညာမဖြစ်လို့၊ ဘာကြောင့်၊ ညာကြောင့် အကြောင်းပြချက်တွေမြောက်များစွာနဲ့ လူတွေဒေါသဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တတ်နိုင်သ၍ ဒေါသကို မထွက်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မြှင့်ယူခြင်းပါပဲ။ ကမ္ဘာကျောစာရေးဆရာကြီး တစ်ဦးပြောသလိုပေါ့ “အလကားနေရင်းလောကကြီးကို ဆွဲဆွဲမထည့်ပါနဲ့ အပြစ်မတင်ပါနဲ့၊ လောကကြီးက သင့်ကို ဘာဖြစ်စေရမယ် ညာဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီး တာဝန်ယူ ခေါ်ဆောင်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး” … ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကလေးက သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရာမှာ စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျက်ဝဲ့(ခ်ျ) က ပြောထားတာရှိသေးတယ်။ “Control your own destiny or someone else will” ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးပါ။ မဟုတ်ရင် သူများကဖန်တီးသွားလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးပါပဲ။
ဆိုတော့ကာ ကျနော်အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ Personal Development ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေရာမှာ ချည်းကပ်ရ မယ့် ရှု့ထောင့် (၅) မျိုးကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြပေးပါမယ်။ ယင်းတို့ကတော့ (1) Spiritual Development (2) Emotional Development (3) Mental Development (4) Social Development (5) Physical Development … ဆိုတဲ့ ရှု့ထောင့် တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Personal Development ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်များအနေနဲ့ ယခုဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီးတဲ့ နောက် ရှု့ထောင့် တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသေးစိတ်ကို ရှာဖွေလေ့လာပါ။ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပါ။ အောင်မြင်မှုဆီကို အားကြိုးမာန် တက်ချီတက်ကြပါ။ ခရီးမစမှီ လက်မလျှော့ကြပါနဲ့။ အောင်မြင်မှုက သင်တို့ရဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာလို့ သဘောပိုက်ပြီး မျိုးဆက်သစ်များ ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း …….
Labels: Learning articles, Lifestyle, Opinion